Kuthetha ukuthini ukuphupha iBhabhathane? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Iyintoni intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane?
2 Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane amaninzi?
3 Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane amnyama endlini?
4 Intsingiselo yokuphupha ngokufika kwamabhabhathane
5 Kuthetha ukuthini ukuphupha ndiphethe ibhabhathane ngesandla
6 Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane eblue
7 Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane etyheli
8 Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane eliluhlaza
9 Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane elibomvu
10 Kuthetha ukuphupha ibhabhathane elimnyama
11 Kuthetha ukuthini ukuphupha ibhabhathane elifileyo?
12 Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane aliqela
13 Intsingiselo yokuphupha amabhabhathane ombala ofanayo
14 Ngaba ukuphupha ibhabhathane kuya kubonisa into elungileyo okanye embi?
Iyintoni intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane?
Ukuphupha ibhabhathane kuthetha izinto ezilungileyo nezingalunganga, ke liphupha elithandabuzekayo. Ukwenza izinto zibe lula, kubalulekile ukuba unike ingqalelo kwiinkcukacha zephupha ukuze ukutolika kuchane.
Ingabonisa ukuba luphawu lwethamsanqa eluthandweni okanye isifo esinokubakho. Kuyimfuneko ukugxininisa ukuba inqaku eliphambili kukuqonda ukuba iphupha elifanayo linokuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Yonke into iya kuxhomekeka kwimeko eyenzekileyo ephupheni, oko kukuthi, kuya kufuneka ulumke ngawo onke la manqaku.
Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane amaninzi?
Eli phupha libonisa iimeko ezithile ekufuneka ziqwalaselwe ngokwebhabhathane. Utshintsho olwenziwa yile bug encinci yinto eya kuthi ifumane ingqalelo enkulu ebantwini. Kubalulekile ukunikela ingqalelo kweli nqanaba ukuze iphupha libonakaliswe ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Ukuphupha ibhabhathane kuthetha ukuba uguquko lwenzeka kubomi babantu. Eyona nto ibalulekileyo kukuzama ngawo onke amandla ukuba konke oku kuthetha into elungileyo. Ukuba uphuphe eli phupha kubonisiwe ukuba uzama ukulungelelanisa okwenzekileyo kwenye yezo meko zichazwe apha ngezantsi.
Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane amnyama endlini?
Ukubhabha kusoloko kuzisa imvakalelo enkulu yenkululeko kwaye inqaku elo lihlala linomdla kakhulu. Imalunga nokusebenzisa eli thuba lokuhamba el mundo kwaye wazi iinkcubeko zehlabathi elitsha. Ukuba ufuna ukuthatha uhambo, eli lelona xesha lilungileyo lokuqalisa ukuba ngumntu okhululeke ngakumbi.
Intsingiselo yokuphupha ngokufika kwamabhabhathane
Into oyifunayo kakhulu ngexesha elifutshane iza kuza kuwe kwaye kuya kuba kubaluleke kakhulu ukuyamkela. Hlala uhleli entliziyweni yakho, kuba ixesha lokuzola lisondela, oko kukuthi, uya kuba nazo zonke izixhobo zokukufeza.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ndiphethe ibhabhathane ngesandla
Luvakalelo olukhulu kwaye uphupha ukufika kwebhabhathane esandleni sakho kubonisa ukuchuma okukhulu. Kuya kufuneka usebenzise eli thuba, kuba eli xesha alizukuhlala ixesha elide, Oko kukuthi, yonke into ilungile.
Into ebaluleke kakhulu kukufezekisa iinjongo zakho ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Zama ukulwela into oyifunayo, kodwa kuya kufuneka unike ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha ukuze ufezekise yonke into.
Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane eblue
Ubulumko bunombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ke luphawu olulungileyo kwaye unokuba ngumntu olumke kakhulu. Kubalulekile ukusebenzisa eli nqanaba ukwenza yonke into ngendlela oyifunayo, oko kukuthi, ngempumelelo enkulu.
Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane etyheli
Ukuchuma kuyeza kuwe kwaye kuya kufuneka uqaphele onke amanqaku ukuze wenze umahluko ebomini bakho. Zama ukuthathela ingqalelo la manqaku kwaye ukuze ukonwabele esi sigaba, khumbula ukugcina imali.
Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane eliluhlaza
Impilo kunye nokuzalwa ngokutsha kusondele kuwe, kuba uThixo wenze umahluko ebomini bakho. Ukuphupha ibhabhathane eliluhlaza kubonisa isidingo sokuqhubeka nokusebenza njengoko unjalo, kuba iyasebenza.
Intsingiselo yokuphupha ngebhabhathane elibomvu
Eli phupha lineentsingiselo ezimbini, oko kukuthi, linokuthetha into elungileyo okanye embi. Ukuba awutshatanga luphawu lokuba uthando olukhulu luza kutshintsha ubomi bakho ngokupheleleyo. Ukuba usebudlelwaneni kuya kufuneka unike ingqalelo kuba kukho amathuba okuba ulwe.
Kuthetha ukuphupha ibhabhathane elimnyama
Ukuba uphupha ibhabhathane elimnyama kuya kufuneka unikele ingqalelo kumagama athethwayo, kuya kubaluleka ukuphepha ukungaqondani nabantu. Zama ukunikela ingqalelo ngakumbi kule nto ithethwayo kwaye ngakumbi indlela obuqhubana ngayo nabanye abantu. Uzama ukuphindaphinda kwaye ngokungathandabuzekiyo uhlala ecinga ukuba ngamanye amaxesha kunyanzelekile ukuba angathethi nto.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ibhabhathane elifileyo?
Eli phupha linzima kwaye linokubonisa imeko apho ungakhange ubonwabele ubomi bakho ngokwesondo. Eli lelona xesha lifanelekileyo lokuthetha neqabane lakho, oko kukuthi, ukuzama ukufumana indlela kunye.
Kuthetha ukuthini ukuphupha amabhabhathane aliqela
Kuya kubakho uhambo ngexesha elifutshane kuwe, Oko kukuthi, ukuphupha kunye nebhabhathane sele kulungile kwaye ukuba kungaphezulu kwesinye, kubhetele nangakumbi. Lelona xesha lililo elifanelekileyo lokuthatha uhambo kunye naloo mntu ukhethekileyo ukuze uphumelele.
Intsingiselo yokuphupha amabhabhathane ombala ofanayo
Ixesha lifikile lokufumana inkululeko yakho kwaye kuyakufuneka uqaphele amathuba. Ungawasebenzisa la mathuba ukunqanda ezinye iingxaki ezinokubakho kubomi bakho bexesha elizayo.
Ngaba ukuphupha ibhabhathane kuya kubonisa into elungileyo okanye embi?
Yonke into iya kuxhomekeka kutoliko lwakho, oko kukuthi, kuya kufuneka unike ingqalelo kuwo onke la manqaku. Kwithisisi, kuya kuthetha into elungileyo kwaye eyona nto ibalulekileyo kukutshintsha ubunyani bakho ngoku. Kuyimfuneko ukwenza ikamva elingcono kuneli langoku okanye elidlulileyo.